Mufananidzo wadanieri wemuhedeni unoratidza zvakaitika nezvichaitika muhupenyu hwedu.
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mufananidzo wadanieri wemuhedeni unoratidza zvakaitika nezvichaitika muhupenyu hwedu.
Mufananidzo wadanieri wemuhedeni unoratidza zvakaitika nezvichaitika muhupenyu hwedu.
Zvakaporofitwa naDanieri zvinotipa gwara kana nzira inofanirwa kuteverwa nenhoroondo yevaHedheni (Gentiles).
Chero chinhu chichakwanisa kuitwa nevatungamiriri vane mbiri vevahedheni, havangazodarika mwero wavakatarirwa naDanieri. Nhoroondo yezviitiko zvepasi rino inofanirwa kutevera gwara kana nzira yaakatara kusvikira panogumira nhoroondo yevanhu paAmagedoni. Pasi pezvakavanzwa nerukato rwezviitiko zvinoita sezvisina ukama munyika ino izere mvonga-mvonga, kuseri kweruvengo rwunobuda pane zvematongerwo enyika nezvitendero uye kusarudzana kwemarudzi, kunobuda mweya wakasimba watinotoona uchitsvaira nhoroondo yevanhu kusanganisira isuwo nhasi uno uchinotirasira kumagumo kwakaporofitwa naDanieri.
Vanhu vane rusununguko rwekuita sarudzo dzavo, sezvo izvi zvakanangana nezvido zveumwe neumwe, makaro uye kufunga nezvedu chete, kazhinji sarudzo idzi hadzina maturo uye tinenge tichizvisimbisa kuti tiri kunatsa. Zviri nyore kuti tinyure mukunyengera kweruzivo rwatisingakwanisi kushandisa, tozosara tisisazivi zvekuita, tapererwa, nekufamba kwehupenyu tozodemba kuti dai takaita zvinhu nenzira yakasiyana neyatakashandisa.
Nekuzadzwa nerudo rwemari, mbiri nebonde zvakareruka kuti tirasikirwe nemuono mukuru wehurongwa hwaMwari pamusoro pehupenyu hwedu. Nevavariro yekuedza kutsvaga chiraramo, mafaro, uye ruchengetedzo runounzwa nemari tinorasika pahurongwa hwaMwari. Tinorasikirwazve nemuono mukuru waMwari waanawo pamusoro penyika ino.Takaita sevanhu vanotuhwina murwizi rwune simba rwakazara umo tinokwanisa kuenda kumativi atinoda. Asiwo simba rechiporofita chaDanieri riri kutitsvaira, kunyangwe tiri kurwisa kana kuridza mhere, tiri kuyeredzwa tiri murwizi rwenguva takananga kuzuva rakatarirwa magumo evanhu.
Saka ngatiteverei Danieri tiedze kusvaga kuzarurirwa pamuono mukuru waMwari .
Kuda kwaMwari ndiko kuchaitwa, kwete kwedu.
Minamato yedu haingapindurwi kana hurongwa hwedu hukapindira pachinzvimbo chehurongwa hwaMwari.
Danieri 2:31 lmi mambo makatarisa, mukaona chifananidzo chikuru, Chifananidzo ichi chaive chikuru kwazvo, chaive nekubwinya kwakaisvo-naka chakanga chimire pamberi penyu, chakanga chichityisa pakuonekwa kwacho.
32 Kana chiri chifananidzo ichi , musoro wacho wakanga uri wendarama yakaisvo-naka, chipfuva chacho nemaoko acho zvakanga zviri zvesirveri, dumbu racho nechiuno chacho zvakanga zviri zvendarira,
33 makumbo acho akanga ari edare, uye tsoka dzacho dzaiti pamwe dare pamwe ivhu.
34 Mukaramba muchitarisa kusvikira muchiona ibwe richivezwa, asi zvisingaitwi nemaoko emunhu,dombo rikarova chifananidzo patsoka dzacho dzaive dzedare nevhu rikadziputsa-putsa.
35 lpapo dare nevhu nendarira nesirveri nendarama zvakaputsanyiwa pamwechete, zvikafanana nehundi iri pamapiriro nenguva yezhezha, zvikatorwa nemhepo zvikasawanirwa nzvimbo ,asi ibwe rakanga rarova chifananidzo rakazoita gomo guru rikazadza pasi pose.
36 Ndizvo zvamakarota, zvino tichazvidudzira pamberi pamambo.
37 Imi mambo muri mambo wamadzimambo makapiwa naMwari wekudenga hushe nehumambo nesimba nokubwinya.
38 Pose panogara vana vavanhu, wakaisa paruoko rwenyu, mhuka dzebundo neshiri dzekudenga, akakuitai mubati wazvo zvose imi ndimi musoro wendarama.
39 Shure kwenyu humwe hushe huchamuka, huduku kwamuri; tevere hushe hwechitatu hwendarira, vachabata panyika yose.
40 Hushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nokuparadza zvose; sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nekupwanya zvose.
41 Zvamakaona tsoka nezvigunwe, zvakaitwa pamwe nevhu remuumbi wehari, pamwe nedare,huchava hushe hwakaganhurwa; asi simba redare richavamo, zvamakaona dare rakavenganiswa nevhu rokuumba naro.
42 Zvigunwe zvemakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu saizvozvo hushe huchava pamwe nesimba, pamwe haungatane kuputsika.
43 Uye zvamakaona dare rakavenganiswa nevhu rokuumba naro, saizvozvo vachavengana namarudzi avanhu asi havanganamatirani, sezvinoita dare risinganamatirane nevhu.
44 Zvino namazuva emadzimambo iwayo Mwari wokudenga uchamutsa hushe husingatongoparadzwi, uye simba rahwo haringapfuuri kune rumwe rudzi rwavanhu asi ihwo huchaputsanya nokuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nokusingaperi.
45 Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo, zvisingaitwi nemaoko avanhu rikaputsa-putsa dare nendarira nevhu nesirveri nendarama, Mwari mukuru wakazvizivisa mambo zvichazoitika pashure; kurota uku ndekwezvokwadi, nekududzirwa kwazvo ndekwezvokwadi.
Danieri akaona mufananidzo mukuru wemuHedeni. Musoro waive wendarama, maoko nechipfuva zvaive zvesirveri, dumbu nenzvidya zvaive zvendarira, makumbo aive edare netsoka dzaive musanganiswa wevhu nedare. Zvino dombo rakarova tsoka chikafufunyuka kuita hundi. Mhepo yakauya ikapupurutsa dombo rikaita gomo.
Simbi ina dzaimiririra hushe huna hwevahedheni hwaizomuka huine simba kuti hutonge Europe ne middle East zvakadarikira kuIndia. Hushe hwese uhwu hwaikurudzirwa newakaipa, asi wakaipa aifanirwawo kutsvaga nzira yekuparadzira nhema neunyengeri pasi rose. Izvi zvaive zvisiri nyore.
Satani aida kutonga pasi rino, achinamatwa semudzvanyiriri. Saka hushe huna uhwu hwaive hwakamiririra testamente tsaru yaSatani yaaishandisa achiedza kubudirira pahurongwa hwake.
Nzira yake yeunyengeri inodei kuti irarame uye izadze pasi rino?
Kurarama ndicho chikamu chinonyanya kurema. Hushe huzhinji hwakasimuka huchizongoparara. Hittler akatanga kutonga muna 1933 aida kuti hushe hwake hurarame chiuru chemakore. Hwakangokwanisa kurarama kwemakore gumi nemaviri (12). Kuti hutongi hwake hurarame kwechiuru chemakore chaive chinangwa chaSatani.
Chidzidzo chaSatani chekutanga chaive chekuedza kutonga Europe nemiddle East.
Nguva yacho yakanga yakarerekera ku 600 BC apo Babironi yaive iri pasi paNebukadhinezari, yakatora nekutonga nzvimbo dzose dzakaipoteredza.
(Kumayunivesiti hushe hwekutanga hwevahedheni uhwu vaizohudaidza kuti kunyengera 101.)
Danieri akaona hushe huna whevahedheni uhwu semufananidzo wemunhu.
Hushe hutatu hwekutanga hwaive hwakasimbirira pamari, mbiri nebonde. Hushe hwechina hwaive dare, hwaive hwakasimbirira pahudzvanyiriri nechisimba.
Mepu iyi inoratidza hushe hweBabironi pakati pemitsara mitsvuku. Hushe uhwu hwaive hwakawandira pakati penzizi Tigrisi neEuphrates.Yaisanganisira Palestine, Babironi yakanga yakunda nekutora Asiria. MaMedes nemaPesia vaiva vakada kuita sevavakidzani veBabironi. Hushe hwekutanga hwakashandiswa naSatani iBabironi, hwakamiririrwa nemusoro wendarama (kuratidza kuti vaikoshesa mari).
Kunyange Babironi yaive isina nyika yakakura, yaive yakapfuma yakazara goridhe. Hupfumi nemari zvaive zvakakosha pakupararira kutadza. Asi pachazvo zvaive zvisina kukwana. Musoro wendarama waimiririra chimwe chinhu chatingataure. Mashoko akakosha aifanirwa kupfuudzwa kuvanhu kuti vaatende. Izvi ndizvo zvaive zvakavanzika zveBabironi. Vaive nekutapa kwakakosha kwavaive nako vachishandisa mashoko pamafungiro evanhu. Mabatiro aya aive akachenjera kunyangwe aive manyepo. Vaitenda kuti mwari wavo aive pahutatu (tiriniti). Kutenda uku kwakabva kwakura nanhasi kuchiri kurarama mumaKristu ezvitendero. Vakagadzira horosikopu kuti vaudze vanhu zvichaitika kwavari. Horosikopu nhasi uno ndiro rimwe rezvinyorwa zvinoteverwa nekuverengwa nevanhu zvakanyanyisa pasi rose zvinowanikwa mumamagazini nemapepanhau achizviti "nyeredzi dzenyu dzinokuudzai ramangwana". Vanhu vekuBabironi vainamata chimwari chainzi Ishta eggs.
nechimwe lshta rabbits. Nhasi uno tinozvidaidza kuti "Easter eggs ne maEaster bunnies". Kisimusi inotsanangurwa se Yule-tide. "Yule" izwi rechi Chalde kana chi Babironi rinoreva kuti "mwana mudiki". Muti wakashongedzwa nendarama nesirveri pakati penguva yechando (Zvita) waimiririra Nimrod mwari wavo akauraiwa aimuka kuvakafa. Roma yakatevedzera izvi vaishandisa muti wakanaka wakatemwa kubva musango kumiririra kufa kwaNimrod, musi wa 25 Zvita vaizoushongedza wochimiririra kumuka kwake. Saka muti wedu wekisimusi wakatanga kare munguva yemaPegani.
25 Zvita izuva rakasarudzwa namambo wekuRoma ainamata zuva ainzi Aurelian mugore 274 AD sezuva rakazvarwa mwari wezuva "sun god". Zvaive zveipapo ipapo kuti idyai imwai mufare. Vaipanana zvipo panguva iyi. Kumakore akatenderedza 350 AD Bhishopu wekuRoma akaisa mhemberero dzinopikisa akadziti kuzvarwa kweMwanakomana waMwari "Son of God" musi wa 25 Zvita.
Mhemberero dzemaCatholic dzinonzi "Masses".
Zuva iri vakariti Christ'smass nhasi uno tave kuriti Christmas. Kunamata mwana naamai vake kwakatangira kuBabironi pazvitendero zvavo. Zvakaenderera mberi nazvino vanhu vanonamata Mary naJesu.
Saka musoro weBabironi wendarama waive nemuromo wakaunza tsika dzehutapwa nanhasi vanhu vachiri vakatapwa nezvakaunzwa nemuro uyu.
lzvi ndizvo zvimwe zvezvakavanzika zveBabironi zvicharamba zvakarimirana kumuganhu nechokwadi. Ndiko kusaka Danieri akatangira pahushe hweBabironi. Musanganiswa wekukanganisa uyu, nedzimwe pfungwa dzakazouya nemaPegani dzakapinda muvaPesia maGiriki nemaRoma zvikasvikosimbisa tsika dzechechi yeRoman Catholic dzisimo mubhaibheri.
Nebukatinezari akanga akakosha aive musoro wemufananidzo. Satani akazviona kuti hurongwa hunobudirira hunofanirwa kuva nehutungamiriri hwemunhu kuti akwanise kudzoreredza munhu wese. Kudzvanyirirana muzvitendero kwakakosha. Vanhu vanoda kutongwa nemunhu wenyama, Pop anotonga nenzira yechidzvanyiriri. Saka mutungamiriri ane hukuriri akakosha pakuparadzira kukanganisa. Asi izvi zvaive zvisina kukwana nekuti Babironi haina kurarama kwemakore anodarika 70. Yakaperera paruvoko rwemhombwe yaimwa ichiraradza Belshazari. Muri kuona here panonyurira vanhu pavanenge vaita mari zhinji? Havakwanisi kuita nyika rema nehungwaru hwezvakavanzika zvavo kwenguva refu. Kunyanya kana chizukuru chemunhu anokudzwa wacho ari chidhakwa uye ari rema. Saka Satani akaona kuti pane chaaive asiirira. Saka akaona kuti pamwe zvikuru zvaive nani pakudzikamisa hushe hwaizogara.
Asi kudonha kweBabironi kwaisareva kupera kwechitendero.
Hushe hwemaMedes nemaPesia hwakamuka. Nyika huru yakataridzwa nemitsara mitsvuku.
Kana hushe hwaive nenyika diki hwakatadza kurarama zvichida akaedza hushe hune nyika yakakura kana kutora pasi rose zvingashande here? Kuti kukanganisa kurarame tinoda hupfumi nehutungamiriri hwemunhu ane hukuriri asizve tinoda mubatanidzwa wakanyatsoiswa oyiri yakakwana uchitungamirirwa nebato rakarongeka nevanhu vepamusoro-soro vachinyatsotevera pfungwa yemutungamiriri wavo. Saka MaPesia nemaMedes vakamuka vakava hushe hukuru hune nyika huru pasi rose dzikaita mubatanidzwa waitarira mapurovhinzi 127 nenzira yaidadisa.
Nhasi uno Pope ndiye mukuru achiteverwa nemaAchibhishopu kwouyawo mameturopolitans uye maCadinari nevamwe vakadaro vanofambisa basa mukereke. Mazita ose aya nezvigaro izvi hazvimo muBhaibheri. Kadhinari izita raishandisirwa mapirisita ekuBabironi. Mukuru wemapirisita ekuBabironi aidaidzwa kunzi supreme Pontiff nanhasi Pope achiri kungonzi Pontiff.
Maoko emufananidzo wechiratidzo chaDanieri chemuHedeni anomiririra simba rekugona kupararira nekutambanuka vachitapa nekupamba zvikamu zvikuru zvenyika, kuitira kuti vave nenyika huru. Mapesia akaunzazve pfungwa yekuti vanamate mambo wavo wemaPesia samwari sezvo kwavari aive mumiririri waMwari panyika. kunamata munhu aitungamirira yaive nzira yakakosha yekuswededza nekubatanidza vanhu vakasiyana-siyana kuti vave rudzi rwumwechete.
Lyi yaive mbiri huru kwazvo kumunhu mumwechete. Kunamatwa kunge mwari, nevanhu vehushe hwakazadza pasi rose.
Asi madzimambo ePesia akava nekuzvitemba vasingakoshesi zvakawanda vakaramba vachirarama mukati merima vakarasikirwa nekuona chokwadi hushe hwavo hukaparara kwapera makore anosvika 200. Apa Satani akakwenya musoro. Zvimwe hushe uhwu hwanga huchiri hudoko, zvimwe vaive vasina kunyatsochenjera. Zvichida hunyanzvi hwavo mune zvemauto hwaive husina kusimudzirwa zvakakwana.
Kwakabva kwazouya maGiriki achitungamirirwa nenyanzvi mune zvemauto Alexander the Great. Vakatora Pesia vakakudza hushe hwavo. Vakawedzera dzidzo mukuita kwavo vakanyanya kunangana neSainzi nePhylosophy kana svomho dzavo dzaive dzisina kusaririra. Vaikwanisa kuva nehurukuro dzakarongeka kunyangwe zvavaitaura zvaiva zvisina chokwadi chakakwana. Saka mubatanidzwa wevatungamiriri vakadzidza une mutongi akachenjera waikwanisa kurarama. Vaikoshesa nekunyanya kuita nezvezvinyorwa zvine hungwaru zvinoyevedza.
Nanhasi kuita uku kuchiriko. Mumisheni nemakoreji ethiyoroji kunodzidziswa maprista eRoma.
Kuzvikoro zveBhaibheri ndiko kunodzidziswa vashumiri.
Iyi ndiyo nzvimbo yakakosha yavanopa ruzivo rwekukudza nekuparadzira pfungwa dzavo.
MaGiriki aiita mifananidzo yevanhu vakashama uye vaive nerusununguko rwezvepabonde. MaGiriki aimiririrwa neshumba pamufananidzo. Sezvo vaive vasina murawo patsika uye rusununguko rwavo vakava nembiri zvikuru.Hungochani hwaive hwakanyanyisa . Asiwo hushe hwavo hwakangoparara husina kana kuita makore anosvika 200.
Ndipo pakasimuka Roma kuti itongewo sehushe hweRoma.
Humambo kana hushe hwechina hwaive Roma. Iyi yakava nguva yekubatana. Kukanganisa kwakaitwa nehutungamiriri hwehushe hutatu hwakadarika kwakabatanidzwa kuva mubatanidzwa mumwe. Zvino Satani akaedza kuisa mirairo nepfungwa idzi pavanhu vakatapwa ava.
Mirairo yeRoma yaive yakanaka zvakare vaive vaine uto rakasimba kusimbisa mirairo iyi.
Vakavaka migwagwa kusimbisa nekubatanidza nyika yavo. Roma yaimiririrwa nemakumbo pamufananidzo waDanieri apo vaifamba nenzira idzi vachisvika mativi mana enyika yavo. Nyika yavo yakakura zvekuti yakazopeta ruviri nyika yaAlexander. Satani akabva afara kuti zvimwe akwanisa kugadzirisa dambudziko rake remubatanidzwa wekuipa nekukanganisa kuti urarame nekusingaperi.
Asi Jesu akazozvarwa saka zvose zvaizoshanduka nenzira yaive isingatarisirwi naSatani. Satani aive akangwara asi zvino kwaive kwave neuyo aive akangwara kupinda Satani. Satani akaona kuti kushingirira kweRoma kuedza kutonga nyika dzayakatapa kwaive nemwero wako wekugumira.
Nekuti nyika nehushe hweRoma hwaive hwakapetwa ruviri kupinda hwaAlexander, kuwomerwa kukuru panezvemari kuti vakwanise kudzivirira miganhu yavo yavaive vatapa kwakaita kuti vapererwe nemari yavo yose uye vanovashandira. Roma yekumadokero yakaparara. Satani akadzidza chidzidzo chakaoma, kuti kuedza kutonga hushe hukuru hwakatapwa hune vanhu vakasiyana siyana zvaive zvakaoma uye hazvigari nguva refu. Kunyangwe zvakadaro hushe hweRoma hwakararama kwemakore 500. Zvaive zvisina kunyanya kushata saka simba raSatani raivandudzika asi aive achiri nezvizhinji zvekudzidza.
Asika nguva yaive yatove kunguva yeTestamente Itsva. Zvinhu zvaive zvatoshanduka. Danieri akati kuchava nehushe hwepasi rese huna chete. Zvisinei nekuedza kwaakaita, Satani haana kuzokwanisa kuita hushe hwechishanu. Charlemagne, Napoleon naHitler vose vakaedza zvikuru panguva yavo asi vakazokotamisa huso hwavo vachibvuma kuti vakakundikana. Danieri aive aporofita saka zvaive zvisina maturo kuti vaedze kumupikisa.
(Kumayunivesiti vangadai vachidaidza gwaro idzva rekudzidza kwaSatani, Kunyengera 102.)
Mugore 395 AD Theodosius akafa hushe hwake hukapatsanurwa kuve hwekumabvazuva nehwekumadokero. Kupatsanurana uku kunomiririrwa nemakumbo maviri pamufananidzo waDanieri wemuHedeni.
Hushe hwekumadokero hwakawira kuvanhu vane hutsinye mugore ra 476 AD hushe hwekumabvazuva hwakararama kusvika mugore ra 1453 AD.
Zvino kubva mumatongo ehushe hwekumadokero HweRoma kwakamuka Roman catholic church. MaPope akawana simba nerukudzo kubva pakugadza madzimambo aive nesimba nehutsinye. Kuma 1200 AD Pope lnnocent wechitatu ndiye akatonga Zvine mukurumbira kuEurope. Zvakare zvaitora Mari zhinji kuti vakwanise kutaririra Hondo yairwira nyika uye kuedza kukudza nyika nekutapa nzvimbo dzakapoteredza zvairema. VanaPope vaive vakasimba vaizoteverwa nevaive vakaneta.
Pope wechiKristu aifanirwa kuda muvakidzani wake. Asizve aida kutapa muvakidzani wake nekumutorera nyika yake. Iyi yaive tsika yakaomera Pope kuti aruramise.
Mambo akasimba akaita saPhilip akarurama wekuFrance akamisa Kuita kwemaPope kwekutorerana nyika uye akamisazve mari yemutero yaidiwa naPope kumachechi EkuFrance. VanaPope vakatadzazve kuwirirana nechiuto uye huchenjeri HwaNapoleon sezvo iye aitora hupfumi hwechechi yeRoman Catholic nehwevatungamiri vayo.
Nazvino Satani haasati adzidza chidzidzo chake. Kutapa nyika muEurope yaive isiri iyo nzira yekutonga pasi rose yaaive akarongera Pope wake aizofamba asingateveri nzira yaKristu munguva yekutambudzika kukuru, pakupedzisira kwenhoroondo yevanhu. Zvino Satani aifanirwa kudzidza chidzidzo kubva kumabvazuva apo kumakore akapoteredza 1200 AD, Khan muMongori akatonga KuMongoria, akatapa chikamu cheChina, chikamu chehushe hweMosiremu, uye chikamu che Russia. Akaita hushe hwaive hwakakura kupinda hwaive HweRoma. Vazukuru vake vakatongawo chimwe chikamu chaive chakapeta hushe hweRoma ruviri.
Muzukuru wake akava nemukurumbira ainzi Kubila Khan, akatapa China akazova muChina kwapera makore anokwanisa kuita 300. Tsika dzavo dzakanyunguduka dzikatsiviwa netsika dzechiChina dzinova nyika dzavaive vatapa. Zvino Satani akadzidza kuti kana humambo hwakakura kunge hwaive hwatapwa nemaMongori husina kukwanisa kurarama kwenguva refu, saka kuedza kutora pasi rose nechisimba hazvaizoshanda Nzira dzisina kugadzikika dzechisimba dzinoita kuti pave nemwero uye zviitiko zvisakamboonekwa.
Saka nei Danieri asina kuisa chiporofita chake pahushe hwaive hwakakura hwaive hwatangwa NaGenghis Khan aive nyanzvi pane zvekurwa watinokwanisa kuenzanisa takarerekera kwaari naAlexander? Kune vanofunga kuti Genghis akanga akakunda Alexander.
Saka nei Danieri akanangana na Alexander achisiya maMongoli? Nekuti Danieri aitevera hushe huna hwaigadzira nheyo dzine mativi mana akaenzana ezvitendero zvemaPegani izvo zvaizorambidza chiKristu kuti chiende mberi. Zvitendero izvi chazvaida chete mumiriri ane simba kuti aite kuti Zvakavanzika zveBabironi zvitonge nekukura pasi rose.
Zvino Zvakavanzika zvebabironi zvakapinda mukereke zvikashandura kereke kuti ive Babironi yakavanzika, pamusoro penheyo dzenzvimbo dzine simba pahushe huna uhu Satani akagadzira chinhu chikuru chine simba pakuresva nekunyengera chinozivikanwa sekusimuka kwekereke ye Roman catholic nemweya wezvikamu zvayo zvinotevedzwa nevateveri vayo vachivaka chifananidzo chechitendero chechichechi-chechi chinotevera nzira yavo yechiCatholic.
MaMongori Havana chavakaita pakusimuka kwekereke ye catholic ichitora tsika dzemapegani nezvakavanzika zveBabironi ikapinda muRoma Zvino muRoman catholic. Zvino mutungamiri wezvakavanzwa zveBabironi vaimudaidza kuti Pontiff. Zita rimwechete iroro rinotsanangura Pope semutungamiri weRoman catholic. Ndicho chikonzero nei Danieri akasiyana nemaMongori nekuti aisafadzwa nevavaki vemaguta nekuti aiziva kuti maguta anozowa opupuruka akadaro. Saka aizotambisirei zvake simba nenguve achitaura nekunyora Zvinhu zvisingatori nguva zviri mudandaro repasi rino. Danieri aironda gwara rechinhu chaizorarama kwenguva refu apo aironda gwara rechikara nyoka apo muzvezve wayo unotyisa wekutadza wainanaira kubva muBabironi uchipinda muRoma uchidarika nekuPesia nekuGreece uchipedzisira nekunguva yemaPope.
Mamongori akabatsira Catholic neimwe nzira yavaisafungira kupfurikidza kurwisa nekukunda humambo hwemaMoslem avo vaive vatanga kusimba pane zvekurwa zvekuti vaitozokunda nyika dzakati kuti muEurope. Vakadzivirira Europe kubva kumaMoslem avo vakasimba vachibva nekumabvazuva.
Ichi Ndicho chidzidzo chaSatani chaitevera chekuti Pope aifanirwa kusiya tsika yekupamba nekutonga nyika nechisimba. Izvi zvakaitwa apo ltaly yakayananiswa, na Garibaldi nevamwewo kushure kwehondo yakatora nguva refu mugore 1870. Pope akabva aendeswa kuguta duku-duku rekuVatican kwaaisafanirwa kubva kwaive nevanhu vaisvika 1000 chete.
Asi izvi zvose zvaive chikamu chehurongwa hwaMwari sezvo Danieri aive aporofita nezve "nyanga duku-duku”.
Kana nyanga ichimiririra humambo kana nyika, Saka Vatican ndiyo nyika duku-duku pasi rose.
Sezvayakatsanangurwa na Danieri senyanga duku.
Kunyangwe zvakadaro Ndipo pazvainyanya kutyisa nekuti ndipo pakamanikidzwa Satani kudzokorora kufunga mazano ake. Danieri akaona chikara che Roma chakasiyana nekure nezvehumwe humambo hutatu uhu. Saka nevanhu vakapfigirwa muVatican Satani akabva ashandura maitiro ake. Senyoka inovhunura, Pope asiya pfungwa yake yekuti chechi yeRoman Catholic itonge nyika huru sezvaiitwa nemamwe madzimambo nedzimwe nyika.
Kereke yeRoman Catholic yakatanga mugore 1929 sekereke yakazvimiririra ine simba pamweya uye simba panezvemari. Vakanga vasiyana nezvechiuto nezvenyika.
Kubva apa Catholic yakanga isisina kusunganidzwa ne Europe mune zvemiganhu kana chero chinhu chine hukama nezvenzvimbo. ChiCatholic chatsvaira pasi rose uye chiremerera chayo chiri kuwedzera nevanhu vanochitevera vanotora chidimbu chimwe pazvidimbu zvitanhatu zvehuwandu hwevanhu vanorarama pasi rose. Catholicism nhasi uno iri kutapa mweya yevanhu nehukuru hwayo pane zvematongerwo enyika, zvezvitendero netsika dzechiPegani. Kuita izvi iri kutora mari yevanhu yovaunzazve pasi pehutongi hwemunhu anova Pope.
Haisisiri hushe hwenyika zvachose asi yava kereke ine simba mune zvemari.
Yave nemusiyano mukuru kubva kuBabironi, Persia ne Greece. Ava vatatu vaivavarira kuva nesimba pane zvemiganhu yenyika Saka pavaikundwa votapwa ndipo pavaibva vaperera.
Sehushe hwemiganhu yenyika, hushe hweRoma hwakapararawo asi mweya weRoman wakazvimutsazve sesimba pane zvemweya. Kereke yakapfuma zvikuru, nekudaro yakamuka kubva kurufu rwakapihwa chigaro chehushe hweRoma chaive chivakwa chikuru pachikomo chemutsetse mukuru. Pavakakunda Roma vakabvisa aive mutungamiri wayo pakupedzisira Romulus Augustus mugore 476 AD. Nhasi uno kereke yeRoma ine nzvimbo diki kuRoma asiwo simba rayo rekuti kereke inotongwa nemunhu semukuru wayo riri kuramba richipararira. Kuri kuvakwa mamwe makereke achipiwa mazita asiri iri rekuti Roman Catholic asi achitungamirirwa zvakare nevanhu.Vapanduki ava vari kuzobatana pakuburitsa mufananidzo wekereke yeRoma pamaitiro avo mumasangano avo.
MaKristu anotenda kuti kereke inofanirwa kutungamirirwa nemunhu. Kunyangwe kanzuru yemakereke yepasi rose ichapedzisira yave nemutungamiri mumwe-chete, achazova Pope mupikisi waKristu pakupedzisira.
Bhaibheri rinoti Jesu Kristu ndiye mutungamiri mumwe wekereke, kwete munhuwo zvake.
Ko tsoka dzemufananidzo waDanieri dzinoti chikamu dare chikamu ivhu dzinomiririrei?
Danieri 2:42 Zvigunwe zvekumakumbo zvazvanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu, saizvozvo hushe huchava pamwe nesimba, pamwe haungatani kuputsika.
43 Uye zvamakaona dare rakavenganiswa nehvu rokuumba naro, saizvozvo vachavengana nemarudzi evanhu, asi havanganamatirani, saizvozvo dare risinganamatirani nevhu.
Tsoka idzi dzinomiririra makore 2000 emakereke manomwe. Dare rinomiririra mweya wehushe hweRoma wakasimba, une hutsinye wakatanga kuroverera maKristu mugore 64 AD pasi pehutongi hwaNero. Pagore 312 AD apo Constantine akaisa rusununguko pachinamato mambo weRoma aive auraya maKristu anosvika 3 miriyoni. Kumakore akatenderedza 400 AD Augustine Bhishopu weRoma wekuHippo guta riri kumusoro kweAfrica, akanyora kuti zvaitenderwa kuroverera vose vaisatenderana nezvaidiwa nechechi yeRoma. Munguva yeRima neyevakatevera vaipikisa dzidziso dzaLuther chechi yeRoma yakava nemhosva yekuuraya maKristu aipikisa Pope aisvika 68 miriyoni. Ndiwo mazuva akaputswa mwenga waKristu wechokwadi kasingaperi. Sechingwa chisina mbiriso chakadimburwa vakapihwa nerudo husiku uhwo Jesu asati arovererwa. (Chatinoti chirairo chaKristu, kana kuti chirairo chehusiku hwekupedzisira, kwete chirairo chemangwanani.) Chingwa chakadimburwa chaimiririra muviri waKristu.
Saka maKristu echokwadi akarovererwa mukufamba kwenguva kuitira kuti tisiye kuzvivimba. Hatingakwanise kushandira Mwari kunze kwekunge tazviramba tave kuvimba maari. MaKristu anozvida, anozvikudza, uye haadi chiro haasi chikamu chemuviri waKristu uye havasi mwenga wechokwadi waKristu. Mudzimai anotora zita remurume wake pawanano. Nzira yega yatingatore nayo zita remurume wedu kupfurikidza nerubhabhatidzo rwemvura. Rubhabhatidzo muzita raShe wedu Jesu Kristu. Kwete rubhabhatidzo muzita rechinzvimbo chaaive nacho sekuti muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Aya ese haasi mazita. Farao raive zita rechinzvimbo, Moses raive zita rake. MaJuda akatevera Moses pavakabhabhatidzwa mugungwa dzvuku vakararama (raive zita rake rekuzvarwa naro). Vana veEgipita vakavatevera nepakati pemvura nemuzita rechinzvimbo (Pharaoh) vese vakafa.
Makristu akaputsika anoshandira Mwari nemoyo wese. Vakasunungurwa kubva patsika yechichechi-chechi iyo inotenda zvenyama. Vanongotenda kuBhaibheri chete. Havateveri munhu kana kutenda muhutungamiri hwemunhu.
Imwe nyaya inonakidza zvikuru: Russia neAmerica dzakasangana mugore ra 1960 pamusangano weUnited Nations, Eisenhower aive mukuru weAmerica (Eisen zvinoreva dare) Khruschev aive mukuru mukuru WeRussia.(Khruschev zvinoreva kuti ivhu muRussia) Khruschev akagumbuka akatadza kuzvidzora akakurura shangu yake akarova nayo podhiyamu. Paive pasina kuwirirana apa. Ivhu nedare hazvisangane zvikabatana. Maona zvazvinoda kureva: kubvisa kwaakaita shangu yake kwakaita kuti titarisane netsoka. Izvi zvinokwanisa kuva yambiro kubva kuna Mwari, Nguva yemakereke yakafamba kupfuura tsoka yemufananidzo ikozvino tave kuzvigunwe. Yave nguva yedombo kuti riuye rirove chifananidzo kutsoka kuti chichiparare. Yave nguva yekudzoka kwa Jesu.
Ivhu rakaputsika roga ndiro raachatora achienda naro kumabiko emuchato neGwaiana. Vamwe vanhu vose vachazoenda panguva yakaoma, yekutambudzika ndivo vachazoputswa zvakaomarara. Asi panguva imwechete iyi maKristu mazhinji achange akamira pazvitendero zvavakatenda zvakabva kuBabironi, zvichaburitswa mavari. Nekuti vakatenda zvavakaudzwa nevatungamiri vavo vakawira mukutambudzika, vacharasa tariro, nekuvimba kwavo muvatungamiri vavo kuchapera. Zvino vachatanga kuvimba neBhaibheri, uye vachazoona kuti Jesu Kristu, kwete umwewo munhu ane mbiri, ndiye musoro wekereke. Ichava nzira inorwadza kudzidza nayo kumhandara dzakarara. MaKristu emumasangano achakundiswa zvino vachazouraiwa nechikara chekuRoma uye nemufananidzo WeAmerica wemakereke akapanduka. Vachazouyawo kwapera makore 1000 pazuva rekutongwa asi vozonzwirwa tsitsi. Asi vanozova muchikamu chepiri pavagari vedenga nekusingaperi, nekuti vakatenda Bhaibheri pachokwadi, mwenga waKristu ndivo vachagarira pedyo na Jesu kupinda ivo. Mudzimai ndiye ari pedyo nemurume wake kupinda vamwe vanhu vose.
Saka sarudza: pakati petsika dzemasangano dzinounza hunhu hwechichechi-chechi kana kutevera nekutenda Bhaibheri.
Mutambo wemuchato kana kuti chikara.
Kudya kana kuti kudyiwa (nemagora paAmagedoni).
Imwe yambiro yemagumo yakauya mugore 1948 apo lsirairi yakanzi yava nyika zvekare. Ichi chiratidzo chekuti Mwari ave kudzokera kumaJuda. Mugore 1967 vakarwa vakakunda hondo mumazuva matanhatu. Izvi zvinopa chimiro chekuna Genesisi apo zuva rechinomwe nderekuzorora saka maJuda ave kudzokera panzvimbo yawo mumagwaro. Zvinoreva kuti nguva yemaGiriki yave pedyo kudarika. Nekuti kana Mwari vapedza nemaHedeni ndipo pavachadzokera kumaJuda.
Chifananidzo chaDanieri chine imwe dudziro yakadzama. Munhu wesimbi naizvozvo haana hupenyu.
MuTestamente yekare ruponeso rwaive rwemaJuda chete asi shinda yeruponeso yakazorudunukirawo kunze kwechifananidzo chemuHedeni. Mutsetse weropa raizofamba muMuponesi raive rabva kuvanhu verudzi rwa Abrahama izvi zvinomiririrwa nemutsetse weruvara rweshizha unobva mudenga uchidzika. Musoro wechifananidzo waive wekumakore 600 BC zvitsitsinho zvetsoka zvaive zvekumakore a33 AD apo Kristu akatifira paCalvari.
Pamuchinjikwa ruponeso rwakayambukirawo rwukasvika kumufananidzo wemuHedeni nepasi petsoka.
Satani chikara nhasi uno tinochiona senyoka. Jesu akati kuna Petro "lva iwe kushure kwangu, satani" saka ndiyo nzvimbo yewakaipa, kumashure kwa Jesu. Nyoka ichabva nekumashure ichifamba nedumbu yoruma chitsitsinho chemunhu. Ndicho chiporofita chekutanga mumagwaro. Zvibereko zvenyoka zvicharuma zvibereko zvemunhu pachitsitsinho uyewo zvibereko zvemunhu zvichaipwanya musoro. Izvi zvinotsanangura hondo huru pakati paKristu naSatani paCalvari. Tsoka yakakuvara inomisa munhu kufamba kwekanguvana asi anozopora, pazuva retatu Jesu akamuka akafambazve. Musoro wakapwanyika unotyisa nokuti zvinofambisa ropa mudehenya zvinenge zvapwanyika. Ropa rinova dziva rinoramba richikura. Saka munhu anomboita kunge ari mutano asi panozosairirwa ropa riri mudziva kupfungwa dzake anobva afa. Saka Satani akatongerwa rufu paCalvari. Anoita seari nani nhasi uno asi Ropa raJesu riri kukura nekupararira kuri kuita ruponeso pasi rose saka nenguva yakafanira, Ropa raJesu richasairira pfungwa dzaSatani (hungwaru hwake) aya ndiwo achava magumo ake Satani.
Imwe pfungwa inodakadza yakabva pamufananidzo uyu.
Kunze kwekusabhabhatidzwa muzita Rashe wedu Jesu Kristu sezvakaitwa mubhuku Mabasa evapostora, kereke inosiya zvekare tsika yekugezesana tsoka.
Vanofunga kuti itsika yekutaridza kuzvideredza chete, kana kuti kubvisa tsvina patsoka dzevadzidzi kuti vasasvibisa mumba mavaipinda. Hazvisi izvi zvose, vaive vatopedza kudya kureva kuti vaive vatopinda mumba kare zvaive zvisisabatsiri kuti vachibvisa tsvina panguva iyi kuitira kuti vasasvibise mumba.
Jesu akataura zvinhu zviviri zvaisanzwisiswa naPetro.
Kana ndikageza tsoka dzako, nemuviri wako wese unenge wachena. Airevei neizvi? Pamararamiro edu kana muviri wako wakasviba unofanirwa kuugeza wese kuti uchene.
zvakare Jesu akati Petro aisazonzwisisa izvo aiita asi aizonzwisisa nekufamba kwenguva. Izvi zvinobva zvabvisa pfungwa yekuti aizvideredza. Petro aikwanisa kunzwisisa nekuona panenge pashanda kuzvideredza.
Saka Jesu akati tsika yekugezesana tsoka yairevei?
Pachokwadi Aireva chimwe chinhu chikuru chakadzama chiri mumagwaro.
Maererano nemufananidzo waDanieri wemuHedeni, Shoko raive rava pedyo kupinda mutsoka. Saka tsoka dzega ndidzo dzaikwanisa kunzwa nekuita zvairehwa neShoko. Muviri wese waive kumashure-shure Maererano nenguva, waive watove nhoroondo, vaHedeni ava vaive vatofa vasingakwanisi kuwana chiro kubva pashoko. Tsoka dzine zvadzinobuditsa zvakasiyana nemuviri wese zvinoita kuti dzinhuhwe. Isu vanhu tine kuzvikoshesa, kungofunga nezvedu chete, zvakare tine rudo nekuita zvakaipa nekutevera nzira dzakaipa zvinoita kuti tinhuhwe pamberi paMwari. Saka mvura yeShoko raMwari inofanirwa kugeza isu vaHedheni kuti tive vakachena. Takapoteredzwa nekutadza kwekereke yeRoma nevanasikana vayo, kereke dzemasangano akapanduka, tinoda mvura yeShoko raMwari kuti itigezese tichene kubva pazvatinotenda zvakarasika.
Ndizvo zvinotaridzwa nekugeza tsoka.
Petro haaiziva kuti Shoko raizoyambukirawo kumavaHedeni. Akazozviziva kupfurikidza nechiratidzo kana kuti chiroto apo Mwari akadzikisa mhuka dzakasviba kuti adye. Zvishoma-nezvishoma akazoona kuti mhuka idzi dzaimiririra vatadzi vari vahedheni saka Shoko raizokwanisa kuvachenesawo voita vatsvene.
Base guru rave rekuparidza shoko kuvanhu vese vari kurarama mutsoka dzemufananidzo wemuHedeni. Kuitira kuti vakwanisewo kuzogezwa nemvura yeShoko. Tinochenesa nzira dzedu pamberi paMwari kupfurikidza nekutenda uye kurarama zvinodiwa neBhaibheri.